विदेशमा हुने चार्टर्ड र नियमित उडान तालिका सार्वजनिक, कुन देशबाट कहिले उडान ? हेर्नुहोस
August 26, 2020 708
सरकारले पूर्व’घोषणा गरे अनुसारको मिति’बाटै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका नियमित तथा चार्टर्ड उडान गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मंग’लबार उडानका तालिका नै सुार्वजनिक गरेर भदौ १६ गतेदेखि हुने निय’मित र चार्टर्ड उडान हुने जनाएको छ ।
अब सो तालिका अनुसा’र विभिन्न मुलुकबाट उडान हुनेछ । सरकारले बताएको ता’लिकालाई मि’लाएर दुवै उडान तय गर्न नागरि’क उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । नियमित र चार्टर्ड उडान गरी भदौ १६ देखि अ’सोज १४ गतेसम्म जम्मा ८७ उडान हुनेछन् ।
तालिका अनु’सार भदौ १७ अर्थात सेम्टे’म्बर २ देखि ३० सम्म नियमित उडान हु’नेछन् । त्यस्तै सेम्टेम्बर २ देखि ३० सम्म ६० वटा नियमित उडान हुने भ’एका छन् भने २७ वटा चार्टर उडान हुने तालिकामा ज’नाइएको छ ।
तालिका अनुसार नियमित उडानतर्फ मले’सियाको मालिन्दो एयर तथा मलेसियन एयरलायन्स, टर्किको टर्किस एयरलायन्स, हङकङको क्याथे ड्रयागन, कोरिया’को कोरियन एयर, चीनको चाइना साउर्दन, एयर चाइना, साउदी अरबको एयर अरेबिया, कतारको कतार एयरवेज र दु’बईको फ्लाई दुबई गरि १० वटा वायुसेवाले नियमित उडान भर्नेछन् ।
त्यस्तैगरी नेपालका जहाज कम्पनी’हरुले पनि उडानको अनुमति पाएका छन् । हिमालय एयरलाइन्सले चिनको टोङकुइन, मलेशिया र साउदीबाट उडा’न भर्न अनुमति पा’एको छ । त्यस्तै नेपाल वायुसेवा जापानको नारिता, दुबई, मले’सिया र हङकङबाट उडानको अनुमति पाएको छ ।
उता चार्टर्ड उडान’को जिम्मा पा’एको नेपाल एअरलाइन्स, हिमालय एअरलायन्स, कतार एयरवेज, जजिरा एअर, र सलाम एअरले साउदी, कुवेत, बहरा’इन र कतारमा अल’पत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार गर्नेद्धछ ।
उनीहरुले २७ उडान भर्ने जिम्मा पाए’का छन् । सरकार’ले पीसीआर परीक्षणमा ने’गेटिभ आएका यात्रुहरु’लाइ १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रति’बद्धता जनाइ सिधै घर पठाउन निर्णय गरेको छ ।
उनीहरुले सरकारले रा’खेको वेवसा’इटमा आफ्नो नाम र ठेगाना राख्नुपर्ने छ । र, नेपाल आएपछि एयरपोर्ट मै पीसीआरको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनुपर्नेछ ।
उता बिदेशमै पी’सीआर परीक्षण सुविधा नभ’एको म्ुलुकबाट नेपाल आएका यात्रुह’रुले भने काठ’माडौंमा होटल क्वारेन्टाइनमा शसुल्क बस्नु पर्नेछ । ७ दिन’को होटल क्वा’रेन्टाइन बसाइपछि पीसीआर परीक्ष’ण गरे’पछि मात्रै द्दर जान पाउनेछन् । – न्युज २४ नेपाल
पालन गर्नु पर्ने नियम
Prevआज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस
Nextके तपईंलाई कब्जियत छ ? ठीक बनाउने ७ घरेलु उपाय